Wararka - Horumarinta nooc cusub oo ka mid ah daloolka qalliinka
Dharka cusub ee qalliinka oo ay weheliyaan agabyo kala duwan ayaa leh astaamo xannibaad sare leh, si dheecaanka jirka ama dareeraha inta lagu jiro qaliinka uu ugu qulqulo bacda ururinta ee jihada la dejiyay, oo uusan ku sii sugnaan goobta qalliinka si uu u saameeyo qaliinka, waana ma dhegi doono Ka tagista jirka bukaanka ama daloolka qalliinka waxay sababi doontaa wasakh ama caabuq, mana daadineyso dareeraha soo baxay intii lagu jiray qaliinka jirka shaqaalaha caafimaadka. Sidaa darteed, waxay si wax ku ool ah uga hortagi kartaa is-qaadsiinta bukaanka waxayna ilaalin kartaa shaqaalaha caafimaadka. Nabadgelyadu waxay oggolaanaysaa in hawlgalka si habsami leh oo hufan loo qabto. Sanadihii la soo dhaafay, xirmooyinka qalliinka gaar ahaan loogu talagalay hawlgallo gaar ah ayaa laga soo saaray hal maro oo qalliin ah. Tani waxay sii wanaajineysaa qaliinka caadiga ah ee qalliinka, waxayna sii yareyneysaa halista qaliinka iyo suuragalnimada caabuq.
Xirmada qalliinka waa in lagu qalabeeyaa shukumaan dalool ah oo qalliin. Hawlgallada kala duwan, xirmada qalliinka ayaa sidoo kale lagu qalabeeyay alaab -qeybiyeyaasha ama qalabka loo baahan yahay si loo dhammaystiro qalliinka oo dhan, sida goonnada qalliinka, shukumaannada qalliinka, gogosha miiska, joodariyaasha, taargooyinka Square, go'yaasha faashadda, baalasha, koobabka dareeraha, galoofyada baaritaanka caagga ah , xoog -hawo -mareenka, isbuunyada jeermis -dilaha, kubbadaha suufka, taarikada jeermis -dilaha, iwm, ayaa lagu duudduubay maro SMMMS waxaana lagu xiray shandad -sifeyn caafimaad, waxaana lagu dhex mariyaa xabagta ethylene Ka dib jeermis -diidka, waxaa lagu kaydiyaa bakhaar waana la isticmaali karaa wakhti kasta .
Noocyada xirmooyinka qalliinka ayaa guud ahaan loo qaybiyaa: xirmooyinka qalliinka guud; qalliinka maskaxda, xirmooyinka qalliinka ENT; qoorta, qalliinka wadnaha, xirmooyinka qalliinka naaska; qalliinka kelyaha, xirmooyinka qalliinka caloosha; cudurada dumarka, xirmooyinka qalliinka anorectal; xirmooyinka qalliinka wadajirka ah; dhexgalka Xirmooyinka qalliinka iyo wixii la mid ah. Xirmooyinkaan qalliinka ah waxaa laga furi karaa qolka qalliinka si loo daboolo dhammaan baahiyaha habka qalliinka oo dhan, iyada oo aan loo baahnayn in si ku -meelgaar ah loo waafajiyo qalabka qalliinka ee u dhigma, sidaa darteed waxay ku bilaabi kartaa hawlgallo gaar ah waqti habboon oo wax -ku -ool ah, oo si wax ku ool ah u xannibaya iyo ilaali gelitaanka inta hawlgalka lagu jiro. Dhiigga bukaanka, dheecaanka, daawada dareeraha ah, iwm, ayaa si wax ku ool ah u ilaaliya nabadgelyada dhakhaatiirta iyo bukaanka, waxayna yareeyaan fursadda caabuqa.